Nhumwa dzaVaZuma Dzodzokeraa Zvakare kuZimbabwe neChina
Kubvumbi 28, 2010
Chikwata chenhumwa dzemuyananisi munhaurirano, uye vari mutungamiri weSouth Africa, VaJacob Zuma, chiri kutarisirwa kupinda munyika neChina kuti chisimudzire nhaurirano, idzo dzakaita mangange pari zvino.
Chikwata ichi chakambenge chiri munyika masvondo maviri apfuura apo chakasangana nevatungamiri vemapato ari muhurumende.
Mumwe wevari munhaurirano idzi, uyo asina kuda kudomwa nezita, audza Studio 7 kuti chikwata ichi chichasanganazve nevatungamiri vatatu sezvavakaita masvondo maviri apfuura.
Mwedzi wapera, vari kumirira mapato munhaurirano idzi vakanyora gwaro rezvakabuda munhaurirano dzavakaita, iro rakasvitswa kuna VaZuma.
Bato reMDC inotungamirirwa naVaMorgan Tsvangirai rakanyorawo tsamba kuna VaZuma richinyunyuta nekusafambira mberi kwenhaurirano.
Nyanzvi munyaya dzezvematongerwo enyika, uye vari mudzidzisi paUniversity of Zimbabwe, Professor John Makumbe, vaudza Studio7 kuti havaone paine chinoburitswa nechikwata chaVaZuma, vakati kuzvipedza kuisa nyaya iyi kuSADC.
Mutungamiri wehurumende, VaMorgan Tsvangirai, vari kunetsana nemutungamiri wenyika, VaRobert Mugabe, pamusoro penyaya yagavhuna webhanga guru renyika, VaGideon Gono, uye muchuchisi mukuru wehurumende, VaJohannes Tomana, avo vakadomwa naVaMugabe vasina kugara pasi naVaTsvangirai.
Vaviri ava vari kunetsana zvakare panyaya yemubati wehomwe muMDC, VaRoy Bennett, avo VaMugabe vari kuramba kugadza semutevedzeri wegurukota rezvekurima.
MDC inotiwo inoda kuti idome magavhuna ayo mumatunhu akakunda bato iri musarudzo dzemuna 2008.